JARMALKA: Siyaasigii ruushka ahaa ee la sumeeyay oo ka baxay isbitaalka | Somalia News
JARMALKA: Siyaasigii ruushka ahaa ee la sumeeyay oo ka baxay isbitaalka
Maamulka isbitaalka Charité ee magaalada Berlin ayaa shaaca ka qaaday in isbitaalka laga saaray oo uu “caafimaaday” siyaasigii ruushka ahaa ee dhawaan lagu soo sumeeyay dalkaasi.
Aleksej Navalnyj ayaa bil ka hor la sheegay in lagu soo sumeeyay dalkaasi Ruushka xukuu uu safrayay, waxaana tan iyo markasi lagu dabiibayay isbitaal ku yaal dalka Jarmalka.
Baaris lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in la siiyay sunta loo yaqaan novitsjok oo ah mid ay farsameeyeen militeriga ruushka xilligii Sofiyeedka.
Navalnyj ayaa ka mid ah ragga ugu cad-cad ee mucaaradka ku ah madaxweynaha talada Ruushka haya Vladimir Putin, walina lama oga cidda sumeysay walow ay dowladda ruushka iska fogeysay eedeyntaasi.
20-ka Bishii Agosto ayaa sunta la siiyay siyaasigan xilli uu ku sii jeeday gobolka Sibir ee dalkaasi Ruushka.
Previous articleUNGA 2020: Trump vs. Putin & Xi
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Maanta golaha Shacabka hadal u jeedindoona